धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ ? निम्तिएला १२ समस्या - Internet Khabar
धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ ? निम्तिएला १२ समस्या
November 23, 2017 August 10, 2018 Internet Khabar
उखानै छ, चिन्ताले चितामा पुर्या‍उँछ । यद्यपि, चिन्ता आफैँमा रोग होइन । तर, यसले थुप्रै शारीरिक तथा मानसिक रोगलाई जन्म दिने भएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि यो घातक मानिन्छ ।
चिन्ता र तनाव लिइरहने व्यक्तिको हड्डीमा खनिजकोे मात्रा घट्न जान्छ । निरन्तर चिन्ता लिने व्यक्ति जीउ दुख्ने समस्याबाट आक्रान्त हुँदै जान्छ।
अनुहार चम्किलो बनाउन अप्नाउनुहोस् यी १० घरेलु तरिका
घरमै डाक्टर : मधुमेहका बिरामीलाई कस्ता समस्याले आक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ?
कपाल फुल्यो ? अब नो टेन्सन !